Dọtara Cup agịga ala-agba - China Viproce Industrial
Okwu Mmalite: Enyi cup agịga ala biarin Structure nke DC agịga ala amị (DC ụdị) ka nke oyi akpọrepu ígwè warara n'ụzọ ziri ezi kpụrụ. Structure nke DC agịga ala biarin atụmatụ ohere ịzọpụta na elu ikike. Ha na-adabara ngwa na ohere na ụlọ bụghị ike zuru ezu na-eme ihe dị ka raceway. Ọ dịghị chọrọ on axial ebe mgbe DC agịga ala amị na-enwe n'ime ụlọ. Na ọtụtụ ngwa ime mgbanaka adịghị mkpa maka DC agịga ala ...
Dọtara cup agịga ala biarin
Structure nke DC agịga ala amị (DC ụdị) ka nke oyi akpọrepu ígwè warara n'ụzọ ziri ezi kpụrụ. Structure nke DC agịga ala biarin atụmatụ ohere ịzọpụta na elu ikike. Ha na-adabara ngwa na ohere na ụlọ bụghị ike zuru ezu na-eme ihe dị ka raceway. Ọ dịghị chọrọ on axial ebe mgbe DC agịga ala amị na-enwe n'ime ụlọ.
Na ọtụtụ ngwa ime mgbanaka adịghị mkpa maka DC agịga ala biarin ma aro raceway bụ impractical, ọkọlọtọ n'ime yiri mgbaaka maka DC jiri na Open na DC agịga ala biarin, Close ọgwụgwụ DC agịga ala biarin dị mma maka oru na nso ọgwụgwụ nke na-amị . Operating okpomọkụ nso maka biarin griiz lubricated bụ -20 ℃ ka + 120 ℃.
Owuwu nke dị iche iche na usoro nke na-adọrọ mmasị cup agịga rollers:
Metric usoro: HK BK HKS F FH FY MF MFH MFY
Inch usoro: SCE TOA SCH BCH SN CSN B bh M MH
Osote: Agịga ala-agba
Enyi Cup agịga biarin
Full Toro Cylindrical ala biarin
agịga ala na onu Assembly
agịga ala onu biarin
kaa akara Enyi Cup agịga Iburu
Single Ahịrị agịga ala-agba
SKF agịga ala-agba
Setịpụ Cylindrical ala biarin
Setịpụ agịga ala-agba
Setịpụ ala agba katalọgụ
Setịpụ ala Iburu SKF